नेगेटिभ रिपोर्ट आउँदा यस्तो गल्ती त गरेका छैनौं ?
मुख्य पृष्ठHealth Tips समाज स्वास्थ्य जीवनशैलीनेगेटिभ रिपोर्ट आउँदा यस्तो गल्ती त गरेका छैनौं ?
विराटनगर, १८ कात्तिक । कोरोना संक्रमणको शंका लागेको अवस्थामा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आए राहत मिलेकाे अनुभुति हुन्छ । नेगेटिभ रिपोर्टले यात्रा गर्दा र अरुसँग भेटघाट गर्दा सुरक्षित महसुस गराउछ । तर, परीक्षणमा नेगेटिभ आएको रिपोर्टले व्यक्तिको आसपास हुन वा भेटघाट गर्न पर्याप्त हुँदैन ।
केवल एक पटकको परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको भर पर्नाले मानिसलाई मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी जस्ता सुरक्षाको अन्य उपाय अपनाउन सुस्त बनाउँछ ।
संक्रमणलाई बढावा दिन सक्ने यि नै ठूला कारक हुनसक्छन् । साथै, एक सक्रिय संक्रमणसँग लडेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएपनि जोखिम उत्तिकै रहन्छ । परिक्षण नतिजाको अर्थ वास्तवमै सामान्य जिवनशैलीमा फर्कनु भन्ने हुँदैन । संक्रमणबाट निको भएको पहिलो हप्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ जुन आरामको लागि राखिएको हुन्छ । यो पूर्ण रूपमा काम र समाजमा फर्कनको लागि दिइएको समय होइन ।
रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछिको ७ दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बसि बाहिरका कसैलाई भित्र आउन वा भेटघाट पनि गर्नुहुँदैन । यि कुरालाई हल्का रूपमा लिदा स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ । नेगेटिभ रिपोर्ट आउनुको मतलब कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित भएको मानिन्दैन । शरीरमा पत्ता लगाउनका लागि पर्याप्त भाइरल लोड नहुँदा पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउन सक्छ ।
शरीरमा भाइरस हुन सक्ने तथा अरू कतैबाट संक्रमण हुनसक्ने हुँदा चाँडै संक्रमित हुने अवस्था आउनसक्छ । आइसोलेसनमा बस्ने तथा सुरक्षाका उपाय अपनाउनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विज्ञका अनुसार, संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेमा वा संक्रमणको प्रभावमा परे १४ दिनसम्म अलग्गै आइसोलेसनमा बस्नु पर्छ । यसपछि पनि अन्य व्यक्तिसँगको भेटघाट अझै सुरक्षित हुदैन ।
भेटघाट गरेमा पनि मास्क र सामाजिक दूरीका नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।